प्रोफिट बुकिंग हुँदा नेप्सेमा ३५ अंकको गिरावट ! - Laltin Media
Home»सेयर बजार»प्रोफिट बुकिंग हुँदा नेप्सेमा ३५ अंकको गिरावट !
प्रोफिट बुकिंग हुँदा नेप्सेमा ३५ अंकको गिरावट !
By लाल्टिन डट कम April 25, 2022 Updated: April 25, 2022 No Comments3 Mins Read
आज सोमबार ३४.९५ अंकले घटेर १.४४ % गिरावटको साथ नेप्से परिसूचक २३८६.०१ अंकमा बन्द भएको छ। कारोबार भएका २३९ कम्पनीमध्ये २७ कम्पनी उकालो लागेका छन्, १६३ कम्पनी ओरालो लागेका छन् र ६ कम्पनी स्थिर रहेका छन्।
कारोबार भएका तेह्र उप-समूहमध्ये ११ उप-समुहहरुको सेयर मूल्य ओरालो लागेका छन् भने मात्र २ उप-समुहहरुको सेयर मूल्य उकालो लागेका छन्।
बजार पुँजीकरण घटेर ३३ खर्ब ९४ अर्ब पुगेको छ।
NEPSE Daily Update: April 25, 2022
आज बोलिन्जर ब्याण्डको अपर र लोवर ब्याण्डको अन्तर घटेको विश्लेषणले देखाउँछ (आजको फरकः३१८) जसले बजारमा भोलाटाइलिटी घटेको इङ्गित गर्दछ। बजार आज लोवर ब्याण्ड भन्दा माथि २३८६ मा बन्द भएको छ। आज बजारमा खरिद भन्दा बिक्री बढेको देखिन्छ ।
मुभिङ एभरेज कन्भर्जेन्स डाइभर्जेन्स विश्लेषणले एमएसिडि लाइन जिरो लाइन भन्दा तल -६६ मा आएको देखाउँछ। हिस्टोग्राम बढेर नेगेटिभ १ मा आएको छ। एमएसिडी लाइन तलबाट माथितिर जाँदै सिग्नल लाइनलाई क्रस गरेको देखिन्छ। सिग्नल लाइन जिरो लाइन भन्दा तल -६८ मा छ। समग्र मुभिङ्ग एभरेजलाई हेर्दा बजारमा आज सामान्य बिक्री बढेर प्रोफिट बूकिंग भएको देखिन्छ।
डाइरेक्सनल मुभमेन्ट इन्डिकेटरले आज +१४ डिएमआई लाइन माथि बाट थोरै घुमेर तल तिर झुक्न खोजेको र -१४ डिएमआई तल फर्किएको देखाउँछ। सिग्नल लाइन -१४ डिएमआई लाइनलाई छोएर तल तिर फर्किएको छ जसले ‘ट्रेन्ड निरन्तर’ हुन सक्ने जनाउँछ। -१४ डिएमआई लाईन तल तिर गइरहेको देखिन्छ जसले बिक्री घटेको बुझ्न सकिन्छ।
क्युमुलेटिभ एडी लाइन -४२७५ देखि घटेर -४४११ मा आएको छ। नेप्सेको कुल भोल्युम ४२६१२५४ रहेको छ जुन २१ दिन मुभिङ एभरेज भोल्युम( ३८२०९२८) को ११२ प्रतिशत देखिएको छ।
नेप्सेआज लोवर ब्याण्ड भन्दा माथि २३८६ तिर क्लोज भएको छ । एमएसिडी लाइन जिरो लाइन भन्दा तल -६६ मा आएको छ र सिग्नल लाईन पनि जिरो लाइन तल -६८ मा देखिएको छ भने हिस्टोग्राम नेगेटिभ बढेर १ मा पुगेको छ जसले बजारमा बिक्री बढेको देखिन्छ।
-१४ डिएमआई लाइन तल फर्किएको छ भने +१४ डिएमआई लाईन माथि तिर फर्किएको देखिन्छ र सिग्नल लाइन -१४ डिएमआई लाइनलाई छोएर तल तिर फर्किएको छ जसले ‘ट्रेन्ड निरन्तर’ हुन सक्ने जनाउँछ । आज बजारमा बिक्रीकर्ताको मोमेन्टम बढेको देखिन्छ। आरएसआइ आज ४३.५ बाट घटेर ४०.२४ मा आएको छ जसले आरएसआइको मोमेन्टम घटेको जनाउँछ ।
नेप्सेको आगामी दिनको नजिकको सपोर्ट २३८० को एरिया रहेको देखिन्छ नेप्सेको नजिकको अवरोध २४६० को एरिया रहेको देखिन्छ।
#nepsetech nepse share market